Maamulka degmada boondheere ayaa ka hadlay qarax ka dhacay degmadaas. – STAR FM SOMALIA
Gudoomiyaha Degmada Boondheere ee Maamulka Gobolka Banaadir, Qaasim C/laahi Xasan (Qaasim Dheere), ayaa waxaa uu faah faahin ka bixiyay qarax gaari oo ka dhacay meel aan ka fogayn Taalada Daljirka Daahsoon.
Gudoomiyaha, ayaa sheegay in gaarigan oo laga soo buuxiyay walxaha qarxa la doonaayay in weerar looga gaysto meel uun ka mid ah Magaalada Muqdisho, balse uu si iskiis ah u qarxay, xilli uu wadada maraayay.
Qaraxan, ayay waxyeelo ka soo gaartay qoysaska barakacayaasha ee degan xeendaabka Xarunta Wasaaradda Caafimaadka, waxaana la xaqiijiyay dhimashada laba ruux iyo dhaawaca afar kale.
Gudoomiyaha Degmada Boondheere oo shir jaraa’id ku qabtay goobtii uu gaarigu ku qarxay, ayaa sheegay in wadihii gaariga uu laba cad u kala go’ay, qayb laga soo saaray gaariga dhexdiisa iyo qayb kale oo laga helay goobta ay barakacayaashu degan yihiin.
Qaraxan oo laga maqlay Degmooyinka Madaxtooyada Somaliya ku teedsan, ayaa dareen baqdin leh ku dhaliyay bulshada deegaanka.
Magaalada Muqdisho, ayaa xudun u noqotay weerarada iyo qaraxyada joogtada ihi, ay Shabaabku ka gaysanayan dalka, marka loo eeggo magaalooyinka kale ee dalka.
Afhayeenka Guud Ururka Al Shabaab, Cali Maxamuud Raage (Cali Dheere), ayaa dhawaan sheegay Magaalada Muqdisho in ay tahay furin dagaal, ka dib markii uu sheegay in ay isugu soo uruureen Madaxda Dowladda, Saraakiisha Ciidamada Xoogga Dalka iyo kuwa Midowga Afrika.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa Isniintii Ururka Al Shabaab ku eedeeyay in bartilmaameydkooda 1-aad ay ka dhigteen Caasimadda, si ay muuqaalka uga xumeeyaan dalka iyo dadka Somaliyeedba.
Dagaal saaka mar kale ka qarxay Magaalada Gaalkacyo